Indlu esemaphandleni entle ekuqaliseni kweentaba eziyi-3 - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni entle ekuqaliseni kweentaba eziyi-3
Indlu esemaphandleni entle, edwelisiweyo enezinto ezininzi zokuqala ezingaqhelekanga ezisezantsi kwePen y Ghent kanye kanye kumbindi weYorkshire Dales National Park. Indawo efanelekileyo yokuphumla emva kokuhamba okanye ukuhlola. Imizuzu eyi-5 yokuhamba ukusuka kwisikhululo setreyini kwabo bafuna ukonwabela umzila we-Settle ukuya kwi-Carlisle. Le ndlu isemaphandleni ixhamla kwindawo yokufaka iinkuni, iAga, umatshini wokuhlamba impahla, ishawa yombane, amalaphu avulekileyo, igadi engasemlanjeni esecaleni komlambo kunye nokusondela kakhulu (imizuzu eyi-2 xa uhamba) ukuya kwiibhari eziyi-2 ezintle!
Le ndlu isemaphandleni sisakhiwo esidwelisiweyo esinezinto ezininzi zale mihla ukuze iindwendwe zihlale kamnandi.
Ime kufutshane nepaki ye-National Trust car, yindawo entle yeentaba eziyi-3. Le ndlu ineencwadi ezininzi ezinokusetyenziswa ziindwendwe ukuba kukho abantu abafuna ukubuka iindawo ezikufutshane.
I-Hannam Cottage inendawo yokuphumla entle, amagumbi okulala ayi-3, ikhitshi/i-diner, igumbi lokuhlambela elineshawa yombane, igadi engasemlanjeni enendawo yokuhlala neyokugcina ibhayisekile (indawo enkulu etshixwayo).
Amagumbi okulala ayi-3
Ibhedi elala umntu omnye. Indawo
Ngaphantsi komgangatho sinegumbi lokuphumla elivulekileyo elinemiqadi yasekuqaleni, indawo yokuhlala etofotofo ejikeleze isitovu esivuthayo kunye ne-smart TV. Kukho isiqu esinezinto zokudlala onokukhetha kuzo kunye nemidlalo yeendwendwe zethu ezincinci.
Ikhitshi lineebheyisi zalo zokuqala kwaye lixhotyiswe kakuhle ngeAga, ukongeza i-hob, i-microwave, ifriji, i-deep freezer, umatshini wokuhlamba impahla, umatshini wokuhlamba izitya, iketile kunye ne-toaster.
Indawo yokutyela ihlala kamnandi 5. Umva wekhitshi unemiqolo eluncedo kakhulu yeehaki zokuxhoma iibhatyi kunye nokugcinwa kweebhutsi.
Igumbi lokuhlambela. Igumbi lokuhlambela
Kukho igadi ekhuselekileyo esecaleni komlambo eneendawo ezintle onokuzibona, iveranda nendawo yokuhlala ukuze wonwabele ibhiya ebandayo okanye iwayini emva kokubuka imini yonke.
Indawo yokupaka Indlu esemaphandleni ime ecaleni kwepaki ye-National Trust car, kukho iipasipoti eziyi-2 zokupaka
ezinokusetyenziswa ziindwendwe. Iipasipoti zivumela iindwendwe ukuba zipake kwiindawo ezigciniweyo ecaleni kwendlu esemaphandleni ngaphandle kweendleko zokuhlala kwazo konke.
4.95 · Izimvo eziyi-173
IYorkshire Dales inokuninzi kakhulu; iHawes, i-Ingleton, i-Settle, i-Grassington zonke zingaphantsi kwe-20Mins ngemoto. IHorton yaziwa ngokuhambahamba kwayo, iindawo ezintle ezisemaphandleni kunye nembiza.
Abanikazi bahlala nje ngaphezu kweyure kodwa banokuqhagamshelana ngokupheleleyo ngexesha lokuhlala kwakho, sikwasebenza nomntu ohoyayo okwidolophana elandelayo oneenkcukacha zakhe ezikwindlu esemaphandleni, yena angaba sendlini esemaphandleni kwimizuzu eyi-10 ukuya kweyi-15 ukuba kuyimfuneko.
Abanikazi bahlala nje ngaphezu kweyure kodwa banokuqhagamshelana ngokupheleleyo ngexesha lokuhlala kwakho, sikwasebenza nomntu ohoyayo okwidolophana elandelayo oneenkcukacha zakhe…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Horton in Ribblesdale